Fricassee - एक कोमल, स्वादिष्ट, असामान्य
यो छ - नाम पहिले नै यो स्ट्यु स्पष्ट छ फ्रान्सेली भोजन भान्सा। मुख्य घटक मासु छ, पैन मा तला गर्न टुक्रा मा कटौती। मूल नाजुक स्वाद यो पकवान एक मलाईदार सस दिन्छ। मासु घटक चिकन, खरायो, पाठो देखि हुन सक्छ। सबैभन्दा आकर्षक - परेवा। तपाईं यो पकवान पकाएको गर्नुभएको छ भने कहिल्यै प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो पाल्तु जनावर खुवाउन निश्चित हुन। स्ट्यु - यो एक धेरै कोमल, स्वादिष्ट मलाईदार हलुआ छ। सबैलाई एक पटक यो प्रयास फेरि गर्न इन्कार छैन।
स्ट्यु लागि पहिलो नुस्खा
यो नुस्खा मा सामान्यतः प्रयोग टर्की मासु (- आठ सय ग्राम पट्टिका सात सय)। म तेल को एक हट मिश्रण (घिउ र जैतून) उच्च किनाराको एउटा पैन मा नै, राम्रो Browning को सानो टुक्रा मा कटौती। म एक कचौरा एक टर्की बरस रही पछि पारी। बाँकी तेल सूक्ष्मता कटा ठूलो प्याज frying लागि प्रयोग गरिन्छ। प्याज सुनको रंग हुन्छ भएपछि, मासु संग नै पैन मा जडान गर्नुहोस्। सबै ड्राई सेतो रक्सी को एक सय र पचास ग्राम भरिएको, एक ढक्कन संग कवर र तीस मिनेट लागि लास simmer।
मासु languishing बेला, मशरूम (ताजा मशरूम वा सेतो को आधा किलो) तयार। म तिनीहरूलाई सफा, र म कटौती मेरो (साना)। म quenching को सुरू भएपछि आधा घण्टा मा मासु राखे। एक लाम मा साग, लसुन एक ल्वाड़, शोरबा को आधा कप। यो सबै, मासु होइन्छ म नुन, अर्को आधा घण्टा मरिच र तिर्सना गर्छौं। यो समयमा, चटनी तयार। पानी र आधा कागती को रस को आधा गिलास यो सचेतक दुई अन्डा yolks लागि। Protomai मासु गर्मी बन्द। आफ्नो चलाउनु भएको अन्डा को तीव्रता र चटनी खन्याउन। म तयार रूपमा बित्तिकै सेवा गरे।
यो नुस्खा मा, म सधैं thyme एक sprig थप्नुहोस्। एक फ्रान्सेली पकवान छ, तर यस्तो मसला को आवश्यक विभिन्न सूक्ष्म aromas छ - म स्ट्यु भन्ने विश्वास गर्छन्।
सबै को पहिलो, एक भान्सा सानो बन्चरो प्रयोग बर्क खरायो। एक बल्ब र एक लसुन ल्वाड़ चोट र उच्च किनारा (केतली, पट, utyatnitsu) संग एक डाली-फलाम पट मा तला छ। एक मध्यम grater मा गाजर दल्नु र प्याज थप्न। सबै Passero केही मिनेट। पीठो को ठूलो spoonfuls को एक जोडी नुन को एक चमचा संग मिश्रित। लागि यो खरायो हुनेछ breading मिश्रण। यो मासु बन्द पतन र तेल, जो केही मामलाहरु मकै मा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ उम्लिरहेको मा खाना पकाउन। त्यसपछि तरकारी तलना एक cauldron मा राखे। सबै सेतो रक्सी र आधा एक घण्टा simmer एउटा लास को आधा ग्लास खन्याउन।
पकाउने अन्तमा अघि दस मिनेट को लागि एक मसला को रूप मा, पकवान थप्न दुई चमचा Dijon तोरी, पत्रक लीफ्स एक जोडी, धेरै शाखा thyme, भूमि मरिच। यस तरल पदार्थ आधा-बुझाने लागि पर्याप्त छैन भने, यो रक्सी थप्न छैन आवश्यक छ - यो एकदम उपयुक्त पारंपरिक पानी छैन। को quenching अघि मिनेट को एक जोडी को लागि भाँडा thyme र खाडी पात बाट हटाइनु पर्छ।
द्वारा र ठूलो, fricassee - छुट्टै पकवान। तर यो अक्सर रोचक garnishes, सस को एक किसिम तयार छ। र त्यहाँ पनि सलाद एक ला fricassee छन्।
बिट र ब्लेंडर लागि व्यञ्जनहरु
कुटपिट मा तला zucchini - स्वादिष्ट र सस्तो
सबै अवसरका लागि ठूलो खाजा: पनीर संग बैगुन को तेज रोल
एक tartlet मा सलाद, भराई नुस्खा
को माइक्रोवेव मा आलु: केही रहस्य र व्यञ्जनहरु
के रोज्ने: CVT वा स्वचालित?
रूस मा प्रारम्भिक व्यावसायिक शिक्षा
ब्रेल - ब्रेल वर्णमाला
कसरी "यस Sims 4" मा बढ्न र ठूलो छुट्टी छ?
बडाई क्लब Kemer बीच5hv - स्वाद रहनुहोस्
टिभीको "मलाई पुरुष", जसको अभिनेता पूर्ण आफ्नो भूमिकाको संग सामना गरेका छन्, यो संस्थापक को आशा भेटे